Takelaka Tsara Soratra 002 – Asa soratra voakaly ho an’ny mpankafy ny kanto – Blaogin'i Voniary
140 pejy ianohana ao anatin’ny kanto an-tsoratra samihafa: tononkalo, poezia, riankalo, slam, sombintantara sy angano ary famakafakana, haingoin’ny pika sary, sary manjameva ary kisary tanana. Izay angaha no azoko amintinana ity Takelaka Tsara Soratra laharana faharoa ity. Asa soratra voafantina mba hijanona ho “dindon’ny fiarahamonina ho vela tsy ho fatin-kosoka” no miranty ao ary ao anatin’ny fanandratana tanteraka ny teny Malagasy.
Raha ny mpankafy poezia dia ho safononoka hafaliana mihitsy amin’ireo maro raketin’ity gazetiboky ity toy ny tononkalo: “Tsiahy” an’i Toky Ny AIna JoséClaudio, “Teto” an’i Tsiloko Mahadigny, “Hiakam-pitolomana” an’i Antso Handresy, ny riankalo “Alina matory” an’i Eluart Andriatovonirina sy “Alina – 7 – Volana” an’i Lova ary ny maro hafa tsy ho voatanisako eto. Fa manamafy ny maha “Zava-panahy” sy manandratra avo ny poezia i Narilala ao anatin’ilay famakafakany. Ny Poezia dia natao hivelatra amin’ny lohahevitrin’ny fiainana rehetra, ny ambany maso mibaribary sy izay ivoho tsy takatrin’ny saina ary tsy vitan’ny “adirima” sy “tsianjery” fotsiny ihany.
Ireo sary mandravaka ny boky koa dia manaporofo fa sompitrin’ny talenta i Madagasikara. Ao ny sarisary manjameva iangalian’i Maneva Raharison, ny kisary tanana ataon’i Ida ary ny sary nalain’i Mainty Kely teny rehetra teny.
Anisan’ireo sary mandravaka ny Takelaka Tsara Soratra 002
Singaniko ireto asa soratra ireto izay nandrian’ny foko sy niantefan’ny safidiko manokana:
“Ahy izy, ahy irery” an’i Ravorombato Ony Lantoarimamy. Efa reko matetika amin’ny onjam-peo tokoa io anarana io ary saika maha-te-hiaino hatrany ny tantara nosoratany. Tsy latsa-danja amin’ireny ity sombintantaran’adolatsento latsa-pitiavana amin’olon-tsy fantatra ity.
Nampitebiteby sy Nampangitakitaka ahy ilay tantara nosoratan’i Andrianimerina Hobiana “Angatra Velona”. Anombohany azy: tovovavy tsara tarehy sy lava volo, mijaridina irery ao anaty orana mikija… Azonao an-tsaina angamba ny tohiny! Ampiany ireo laro mampangorohoro ny vatana sy mampisafotofoto ny saina dia voasarika hamaky hatramin’ny farany ianao.
Ilay “Analakely tsy vaky andro” entin’i Hemerson Andrianetrazafy koa, asa soratra raitra dia raitra. Fariparitany ao ny kenonkenona sy ny somebisebin’ny mpitady vola mbola vao maneno akoho eo amin’io ivon’Antananarivo io. Ny filalaovany voambolana, maneho ny haren’ny teny Malagasy moa aoka fotsiny, fa sady mahafinaritra ny maso sy mampitombo fahalalana.
Pao-tsatroka manokana ho an’i Hanitr’Ony amin’ilay Anganon’i “Liana”. Dia liana tokoa moa izany ny tena satria kanto aoka izany no iangaliany ny tantaran’ilay tovovavy mivadika ho sahona rehefa diavolam-penomanana. I Neny Ratao sy ny zanany fito mianadahy moa mikorontandrontana sy mifampiantsoantso eny foana. Santionany nampitsiky ahy teo am-pamakiana azy:
Aviavy a! Avia… Tsisy namaly
Avia, Aviavy ô! Hoy ihany ny feon’i Neny Ratao. Raha avy maka anao any ange aho ka tsy hahazo tsindrin-tsakafo ianao anio e! Rehefa antsoina dia tongava!
Ity avy ity aho e! Hoy ilay tovolahy kely sady nanao tarehy midongy. Isaky ny milalao foana izahay vao antsoin’i Neny ko!
Aza aviavy toy izany ianao e! Ianareo anie milalao foana e! Sa rehefa matory indray ny sombinaiko vao antsoiko?
Tsilalaon-teny maro toy izany no etin’ny mpanoratra manome endrika ilay angano, ny votoatin’ny tantara moa manintona rahateo ka voasarika ny mpamaky hanohy hatramin’ny farany. Amin’ny maha angano azy, ny ankizy no iantefany voalohany ka ahitana ireo singa mampifaly ny kilonga kely ao: vatomamy sy saokola, vatosoa mamirapiratra sy tontolo mahafinaritra. Manaraka izany, natao anabeazana sy ampitana hafatra koa ny angano, ka tsikaritra tsara izany amin’ireo lesona maro azo tsoahina ao: aza mangalatra voankazon’olona, aza mampijaly biby sy ny hoe “ny soa atao levenam-bola”. Ny fampahafantarana ireo karazana kilalao sy fialamboly fanaon’ny ankizy koa mandeha ihany eny antsefatsefany eny. Ao ny mihanika hazo fihinam-boa, mandrary, mioty voninkazo, mangady kankana ary ny manao tanisa,. Raha izaho manokana aloha dia tsy andriko mihitsy izay fotoana hitantarako io angano io amin’ny zanako e!
Raha ny mpanoratra, poety ary mpanao sary mandrafitra ity Takelaka Tsara Soratra 002 ity indray no asian-teny dia miandahy miambavy izy ireo ary tsikaritra ny fandraisan’anjara mavitrik’ireo Malagasy mipetraka any ivelany toa an-dry Ny Antsa Razermera M, Soanja Estelle, Vao Brown, Maneva Raharison, Ida sy ny hafa.
Izany rehetra izany dia ialohavan’ny Teny Mialoha ravahina hainteny. Lahatsoratra fampidirana feno dia feno tokoa satria ahitana ny tantaran’ny soratra sy ny literatiora Malagasy. Tsy adino ihany koa ny kilalao toy ny amin’ny gazetiboky rehetra, ny an’ny Takelaka Tsara Soratra dia randran-teny itsapana ny fahalalanao momba ny literatiora sy ny tontolon’ny haisoratra Malagasy.
Izay no lava, izay no fohy, fa aleo ianao mihitsy no hamaky ka hankafy ny hakantony toy izay hovokisako resabe eto.
gazetiboky malagasy, literatiora malagasy, mpanoratra malagasy, revio literera, takelaka tsara soratra, takelaka tsara soratra 002, teny malagasy
2 commentaires sur “Takelaka Tsara Soratra 002 – Asa soratra voakaly ho an’ny mpankafy ny kanto”
Andrianimerina Hobiana dit :
Tato anaty fihibohana, mikarokaroka, ary nahita an’itony. Mahafinaritra! Mila finoavana be ilay mamahana blaogy aloha. Midera anareo!
7 mai 2020 à 5 h 25 min
Mankasitraka e! Ianareo mpanoratra ireo mihitsy anie no andrasana sy tena tompon’itony e! 😀